हनिमून मनाउन दुबई पुगेकि नेहा यस्तो रोमान्टिक मूडमा देखिइन्! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > हनिमून मनाउन दुबई पुगेकि नेहा यस्तो रोमान्टिक मूडमा देखिइन्!
हनिमून मनाउन दुबई पुगेकि नेहा यस्तो रोमान्टिक मूडमा देखिइन्!
admin November 19, 2020 November 19, 2020 जीवनशैली, बलिउड, मनोरञ्जन	0
मुम्बई । गायिका नेहा कक्कर पछिल्लो समय दुबईमा पति रोहनप्रीत सिंहसँग हनिमुनमा छिन् । सोही क्रमका रोमान्टिक तस्बिरहरु सार्वजनिक गरेर उनले फ्यानलाई आफ्नो बारेमा अपडेट दिइरहेकी छन् । हालै पनि उनले हनिमुनसँग जोडिएको केही तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । तस्बिर हेर्न उनी जीवनसाथीसँग हनिमुन पुरै मस्ती गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसलाई फ्यानले समेत मन पराएका छन् ।
रोहनप्रीतले पनि पत्नी नेहाको यो पलहरुलाई खास बनाउन साथ दिइरहेका छन् । तस्बिरमा दुबैको निकै रोमान्टिक अन्दाज समेत देख्न सकिन्छ । एक तस्बिरमा नेहाले पतिलाई किस गरेको रोमान्टिक अन्दाज देख्न सकिन्छ । अर्काे एक तस्बिर रोहनप्रीतले रोमान्टिक अन्दाजमा नेहालाई किस गरेको समेत रहेको छ ।
कामको कुरोगर्ने हो भने नेहा एक चर्चित गायिका हुन् । उनले बलिउडका लागि कयौ सुपरहिट गीत गाएकी छन् । रोहनप्रीत सिंह पनि पंजावको राइजिङ स्टार हुन् । हालैमात्र पनि उनको एक पंजावी गीत रिलिज भएको छ ।
मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई त्रिशूलीमा खस्दा एकको ज्यान गय‍ो, अर्कोको अवस्था यस्तो !
पानीले उर्जा र जीवन दिन्छ, नेपालमा पानीका मुहान सुकेका छैनन् ! – मन्त्री भट्टराई
जो बेवारिसे शव खोज्दै हिड्छन्
पुनम पाण्डेले नग्न तस्बिर सेयर गरेपछि ट्रोलर्सले भने, ‘पोर्न फिल्ममा किन काम गर्दैनौ ?’
बाल्यकालमा यस्ता थिए महानायक राजेश हमाल, हेर्नुहोस् यी दुर्लभ तस्बिरहरु…